Maxaa Kasoo Baxay Kulan-hawleedkii Golaha Wasiirrada Xukuumadda Cusub ee Somaliland | #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Maxaa Kasoo Baxay Kulan-hawleedkii Golaha Wasiirrada Xukuumadda Cusub ee Somaliland
Hargeysa (ANN)- Kulan-hawleedkii Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi u qabtay Golaha Wasiirrada xukuumaddiisa cusub, ayaa gunaanadkiisii laga soo saaray go’aamo 13 qodob ka kooban oo dhinacyo kala duwan taabanaya.
Kulanka wada-tashiga Golaha Wasiirrada xukuumadda cusub oo muddo afar maalmood ah ka socday hudheelka Royal Palace ee galbeedka caasimadda Hargeysa oo Madaxweyne Biixi soo xidhay , waxa qodobadda ka soo baxay ugu muhiimsan; in la xoojiyo siyaasadda arrimaha dibadda, lana kordhiyo dadaalka loogu jiro ictiraaf-raadinta, in la xoojiyo amniga gudaha, si buuxdana loo sugo xuduudaha dalka, in la dhiirrigaliyo, lana fududeeyo maalgashiga, si loo abuuro fursado shaqo, in la kordhiyo dakhliga, dib-u-habaynna lagu sameeyo nidaamka maamulka maaliyadda, in la sameeyo guddi farsamo oo ka soo talo bixisa xal-u-helidda sicir-bararka iyo kuwa kale.
Warsaxaafadeed uu ku saxeexan yahay Agaasimaha Saxaafadda ee Madaxtooyada Somaliland Mr. Naasir Yuusuf Daahir, ayaa lagu sheegay in kulan-hawleedka wada-tashiga ah oo looga gol lahaa sidii loo xoojin lahaa wada-shaqaynta wasaaradaha iyo dardaragalinta hawlaha qaran ee horyaal xukuumadda cusub, waxa muddadii uu socday goob joog ka ahaa Madaxwayne-ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland Md. Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil (Saylici).
Muddadii shir-hawleedku socday waxa ay xubnaha Golaha Wasiirrada ee xukuumadda cusub yeesheen doodo is daba jooga iyo falaqayn ku saabsan sidii ay u gudan lahaayeen waajibaadkooda shaqo, iyagoo ka duulaya barnaamijka Qorshaha Horumarinta Qaranka ee Labaad (NDPII) iyo barnaamij-siyaasadeedka xisbiga KULMIYE ku galay ololihii doorashadii Madaxtooyada ee dalka ka dhacday bishii November ee la soo dhaafay.
Kulanka oo uu si rasmi ah u soo xidhay Madaxweyne Muuse Biixi waxa gunaanadkiisii ka soo baxay qodobaddan:
1. In xubnaha Golaha Wasiirradu si wadajir ah u shaqeeyaan, iskana kaashadaan hawlaha qaranka ee horyaalla.
3. In la xoojiyo siyaasadda arrimaha dibadda, lana kordhiyo dadaalka loogu jiro ictiraaf-raadinta.
5. In la dhiirrigaliyo lana fududeeyo maalgashiga, si loo abuuro fursado shaqo.
6. In la kordhiyo dakhliga, dib-u-habaynna lagu sameeyo nidaamka maamulka maaliyadda.
7. In la sameeyo guddi farsamo oo ka soo talo bixisa xal-u-helidda sicir-bararka.
8. in kor loo qaado wax-soo-saarka dalka, bulshadana lagu dhiirrigaliyo inay tabcadaan.
9. In kor loo qaado adeegyada aasaasiga ah ee bulshada Somaliland loo fidinayo.
10. In dhidibada loo aaso nidaamka maamul-wanaagga, laguna dhaqmo daah-furnaan iyo caddaalad.
11. In la dajiyo qorshe qaran oo ku wajahan ka-hortagga iyo wax-ka-qabashada abaaraha.
12. In dadaal dheeraad ah lagu bixiyo sidii loo tayayn lahaa shaqaalaha dawladda.
13. In hindisaha waxqabadka madaxweynaha ee boqol iyo labaatanka casho (120) ee u horreeya xukuumadda la fuliyo, wasaarad walbana ay qaybta kaga soo hagaagaysa fuliso.